Guyana Tourism Authority tụpụtara atụmatụ "Nchekwa maka Njem"
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guyana » Guyana Tourism Authority tụpụtara atụmatụ "Nchekwa maka Njem"
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Guyana • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ebumnuche nke atụmatụ a bụ iji kpuchido mpaghara ndị kachasị emetụta ma bụrụ ndị na-adịghị ike na ọrịa COVID-19 yana iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị njem
Atụmatụ ohuru iji mepee njem nleta ma hụ na echekwara obodo na ndị njem
National Task Force-19 Task Force inyocha njem azụmahịa
Ighaghachi ugbu a bụ nke atọ nke hụworo mgbasawanye nke ụgbọ elu azụmahịa
Guyana Tourism Authority (GTA) amalitela izi ozi mgbasa ozi ọhụrụ nke ejikọtara ya na usoro nyocha ya n'ihi COVID-19 nke akpọrọ "Nchekwa maka Njem" nke na-ahụ ahụ ndị njem ahụ, nke National COVID-19 Task Force nyere ikike. azụmahịa ndị njem nleta iji hụ na ha na-arụ ọrụ n'ime National Covid-19 Ihe nchekwa nchekwa gas na n'ọnọdụ ịnabataghachi nlọghachi nke njem ụlọ na nke ụwa. Ebumnuche nke atụmatụ a bụ iji kpuchido mpaghara ndị kachasị emetụta ma bụrụ ndị nwere ike ibute ọrịa COVID-19 yana hụ na ahụike na nchekwa nke ndị njem na-echekarị echiche ka ebe ọ na-agagharị na njem.
Na nzaghachi nke coronavirus, Gọọmentị Guyana kagburu ụgbọ elu ndị njem mba ofesi na-ebido na 18 Machị 2020, agbanyeghị na Guyana Civil Aviation Authority amalitela ịmalite usoro mmeghe. Nkọwa nke ndị dị ka ndị:
Oge 1 - 18 Machị - 11 Ọktoba 2020: flightsgbọ elu mbugharị.
Oge 2 - 12 Ọktoba 2020: flightsgbọ elu ụgbọ elu na-abaghị uru maka ụmụ amaala Guyanese, ndị bi na-adịgide adịgide, ndị njem mba ụwa, ndị ọrụ mba ofesi na ndị nnọchi anya mba.
Oge 3 - Nọvemba 2020 (dị ka nke Jenụwarị 2021): Mgbasa nke ụgbọ elu azụmahịa na-abata nke na-eme ka ndị mba ọzọ na ndị njem mba ọzọ banye Guyana.
Oge 4 - TBC: Mgbasawanye nke ụgbọ elu na-abata na iji pụta iji nyekwuo ọrụ maka ndị njem na mbata na ndị njem.
Site na Jenụwarị 2021, imeghe a dị ugbu a na nke atọ nke hụrụ mgbasawanye nke ụgbọ elu azụmahịa nke na-enye ndị amaala mba ọzọ na ndị njem mba ọzọ ohere ịbanye Guyana. Site na nke a na-abịa n'ihe egwu na nje nwere ike gbasaa site na ndị ọbịa gaa na ụfọdụ nke ndị nwere nsogbu kachasị na Guyana na mba nke hụgoro obere ọnụọgụ ọrịa niile na-efe efe.
Iji kpuchido obodo ndị a na ọnụ ọgụgụ mmadụ dum, a chọrọ ndị njem Guyana ka ha weta ule PCR na-adịghị mma site na ụlọ nyocha enwetara. Nnwale na-adịghị mma sitere na 72 awa mbata ga-ekwe ka ị gafee ọdụ ụgbọ elu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anwale ule PCR n'ime ụbọchị anọ ruo ụbọchị asaa nke njem, a ga-achọ onye njem ahụ ka ọ mee nyocha PCR ọzọ mgbe ọ bịarutere Guyana wee chee ule na-adịghị mma. Ekwesiri ighota na oburu na achoro onye njem ka o lee ule na Guyana, ha gha enweta ego ha GY $ 16,000 (ihe ruru £ 56).
E tinyela atụmatụ 'Nchekwa maka Njem' dịka ụzọ ọzọ iji chebe ndị Guyanese, gụnyere obodo ndị na-adịghị ike, na ndị njem. A na-enyocha azụmahịa ndị njem na usoro nzọụkwụ abụọ. Nke mbu, ha aghaghi idobe usoro oru uzo ha (SOP) na-akowa otu ahia si gbanwee omume ya ma mee ihe ohuru iji gbochie mgbasa nke COVID-19. Ozugbo etinyere SOP, GTA ga-eme nyocha na azụmaahịa ahụ iji hụ na ha na-emezu njirisi ndị a:
1.Signage (ịsa aka, ikpuchi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya)
2.Okpomoku Monitoring (calibrated temometa okpomọkụ achọpụta)
3.Sanitisation - omume na ngwaahịa eji
6. Nlekota oru - otu ahia si atule ihe nlere nke SOP ya
Ozugbo enyochare azụmahịa njem nlere anya ma were ya ka COVID-19 kwekọrọ na GTA na National COVID-19 Task Force, enyere nkwado maka azụmaahịa ahụ ịmalite ọrụ ọzọ.
Na mgbakwunye na usoro ndị a, GTA nwee ike ịnye COVID-19 Nkwado Nkwado nye ụmụ amaala ndị jikọrọ ọnụ ahịa njem na mbụ na ọrịa ahụ. Obodo ndị na-arụsi ọrụ ike na usoro ikikere nke njem nleta na-arụ ọrụ na GTA ritere uru site na ngwugwu nke gụnyere ngwaahịa Ecolab nhicha na ịdị ọcha, infrared thermometers, akwa na ịkwa akwa maka ịkepụta ihe mkpuchi, ndị na-egbu knapsack iji kpochapụ ụlọ na akpa wdg, na akara aka. COVID19. Maka obodo ndị anaghị etinye aka na njem, nchịkọta gụnyere ngwaahịa nhicha, akwa na ịkwa akwa maka ịmepụta ihe nkpuchi na akara ngosi na COVID-19. A napụtara ngwugwu nkwado ahụ site na ọzụzụ ọzụzụ Ecolab na ndị nnọchi anya Ahụike na GTA mere.